HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNitombo ny sidina Metro tao Istanbul
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, TORKIA 0
nitombo ny serivisy metro tany istanbul
Nitombo ny sidina Metro tao Istanbul. Araka ny fanambarana avy any Metro Istanbul, ny sisin'ny metro M6 Levent-Boğaziçi / Hisarüstü metro dia nampitombo ny isan'ny sidina.
Tao anatin'io fanambarana voasoratra io dia nomena izao fanambarana manaraka izao: "M6 All-day sidina amin'ny Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro dia nalamina indray tamin'ny fanombanana ny fangatahan'ny mpandeha ataontsika.
Tao anatin'ny rafitry ny fepetra avelan'ny rafitry ny rafitra ara-batana, nanomboka ny asa natao nanomboka minitra 07: 00-10: 00 sy 16: 00: 20: 00: 5: XNUMX ora maraina.
Nampitombo ny rano tao amin'ny metro koa ny fizarana rano ho an'ny mpandeha 09 / 08 / 2016 Ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny rano ambanin'ny tany dia nozaraina ho an'ny mpandeha: any Moskoa "Timiryazevskaya", "Otradnoye", "Kuzminki", "Ryazanski Prospekt" ary "Prajskaya" metro nozaraina amin'ny mpandeha rehefa miakatra ny mari-pana ny habakabaka. Tao anatin'ny fanambarana avy any amin'ny Metro Metro Moskoa, "metro" Timiryazevskaya "metro metro 28,2 mari-pana amin'ny mari-pana," Otradnoye "fiantsonana metro 28,4," metro "Kuzminki" metro 28, "Ryazanski Prospekt" metro metro 28,2 mari-pana ary "Prajskaya" metro metro 28,2 voalaza. Raha ny voalazan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Metro "Altufyevo" ao amin'ny metro metro 400 dia nizara rano tavoahangy sy tondra-drano nahatratra an'arivony. Taloha, ny gara metro ao Moskoa dia nanomboka régime maika noho ny toetr'andro.
Nitombo ny serivisy fiarandalamby Denizli-Izmir 14 / 07 / 2012 Nitombo ny serivisy fiara fitateran'i Denizli-İzmir: TCDD dia nitombo avo telo heny isan'andro ny isan'ny fiarandalamby teo anelanelan'i Denizli sy i Izmir. State Railways 3. Araka ny fanambarana nataon'ireo Direction Region, 6 avy any Izmir mankany Denizli isan'andro, dia hatao 5 avy Denizli mankany Izmir. Etsy ankilany kosa, ny fifamoivoizan'ny 2 miaraka amin'i Söke-Denizli sy ny fitsangatsanganana iray eo anelanelan'i Denizli sy Nazilli. Ao anatin'ny fanambarana, ny fitomboan'ny sidina dia mitombo amin'ny fangatahana avy amin'ny mpandeha ary ny sidina dia tokony hatao amin'ny sarety Anatoliana. Ny sidina vaovao dia manompo amin'izao fotoana izao (14.07.2012).
SAMULAŞ mampitombo ny fandefasana ny fanadinana efa ela 09 / 05 / 2015 SAMULAŞ dia manentana ny fanentanana ho an'ny fanadinana efa ela: SAMULAŞ A.Ş. Ny 10 dia mikendry ny hampitombo ny isan'ny fiara eo amin'ny sehatra noho ny fanadinam-panjakana sy ny fianarana fianarana amin'ny fianarana ambony (ALES) izay hatao amin'ny Alahady amin'ny volana Mey ary hanohy ny tolotra fitateram-bahoaka tsy misy fanakorontanana. Ny fanambarana SAMULAŞ'dan, tamin'ity toe-javatra ity 10 tamin'ny alahady tamin'ny volana mey, araka ny fandaharam-potoana ara-dalàna ny fiara lamasinina 14'den 16'ye, dia nomena fampahalalana ny fiara mpitondra fiara 5'en 6'ye.
Nampitombo ny rano tao amin'ny metro koa ny fizarana rano ho an'ny mpandeha
Nitombo ny serivisy fiarandalamby Denizli-Izmir
SAMULAŞ mampitombo ny fandefasana ny fanadinana efa ela
Adapazari fandaharam-potoanan'ny lamasinina sy sarety
Fanitarana ny sidina Metro ao Istanbul
Ny Haliç Metro Crossing Bridge dia mampitombo ny vidin'ny trano
Ny tetikasa seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina dia mampiakatra ny vidin'ny trano